Hands Of Enlightenment: 2009
ကျွန်တော်ပြောသော မင်ရည်ကျဲလောက တစ် ၏ စာရွက်နောက်ကွယ်
Posted by ညီစိမ်း comments (1)
ငါကျေနပ်ပါတယ် . . ဒီလိုနေရတာ
လွယ်အိတ်ထဲခေါက်မထည့်ဘူး . . လက်ပ်တော့ပ် ပါတယ် . . တစ်ပုဒ်ချင်းထုတ်စားပြမယ် . .
ရှေ့က အစ်ကိုတွေကို ကျနော် လေးစားတယ်
လေယာဉ်ပျံကြီး စီးမှ ကဗျာဆရာ မဟုတ်ပါဘူး ။
လေထဲ တိုက်အိမ်ဆောက်တတ်ရင် ကဗျာဆရာ ဖြစ်တယ် ။
ဂရမ်းမီးရထားဟိုတယ်လ် မှာ တက်ရေးမှာ ကဗျာဆရာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဂရမ်းရွိုင်ရယ်လ် သောက်ပြီးရေးလည်း ကဗျာဆရာ ဖြစ်တယ် ။
ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ် တလွဲလုပ်ကြတာတွေတော့ ရှိတာပေါ့ ။
ကဗျာတစ်ပုဒ် ဆက်ရေးဖို့ ..
စီးကရက်ငွေ့တွေ မှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် .. ။
" ဟူးးးးးးးးးးးးးး "
လေထဲဆောက်ရမယ့် အိမ်ကို မော့ကြည့်ရတာမောတယ် ။
အခြေမခိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ငုံ့ကြည့်ရတာလည်း မောတယ် ။
တစ် နှစ် သုံး လေး ငါး ၊
ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ရေးတော့ ။
ဘာမှ ဆက်ရေနေစရာမလိုဘူး ။
တစ် ပြီးရင် နှစ် လာမယ် ။
သစ် ပြီးရင် ဟောင်း လာမယ် ။
ကဲ ... ပြော ။
ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ် ။
ဘာက ဆုံးဖြတ်မှာလဲ ။
မှားနေကျ မှန် ကပဲလား ။
ဒါမှမဟုတ် မှန်နေကျ ... တစ်ခုခုကများလား ။
ထားပါ ။ ပြောချင်တဲ့ အထဲမှာ အဲ့ဒါတွေမပါဘူး ။
မနက်ရောက်တာနဲ့ ထွက်သွားတော့မယ့် ရထားကြီးရယ် ။
မနက်ရောက်တာနဲ့ ဆိုက်လာတော့မယ့် လေယာဉ်ပျံကြီးရယ် ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မှုတ်ထုတ်နေတဲ့ စီးကရက်တစ်လိပ်ရယ်လောက်ပါပဲ ။
ပြောပြချင်တာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ ။
ဒီ့ထက်ပိုပြီး ဘာများ သိချင်သေးလဲ ။
ဒီ့ထက်ပိုပြီး ဘာများ အသိပေးချင်သေးလဲ ။
သွားရ လာရ ခရီးက လေးဆယ့်ငါး ၊ ငါးဆယ်
ကျနော်ရယ် ကျနော့် အစ်ကိုတွေရယ်
ပြီးတော့ လမ်းအတုတွေရယ် လမ်းအစစ်တွေရယ်
မျက်နှာပေါ်က ရိုင်းပျခြင်းက တစ်ယောက် ပခုံးပေါ် တစ်ယောက် ဖက်လှဲတငင်
ဒီ လောကရဲ့ နောက်ဘက်က မျက်နှာ
ကျနော့် အစ်ကိုတွေရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်
ဘယ်သူမှ မစောင့်ကြဘူး ထထွက်သွားတယ်
ဒီလောက ရဲ့ ဒီ ခရီး ဖိနပ်ပါးပါးပဲစီး
ဟိုးအရှေ့ ကျနော့် အစ်ကိုတွေကို မှီတယ် ... ။ ။
မောင်မိုးချို ၊ ဆူးခက်မင်း ၊ ညီစိမ်း ၊ ရုပ်သေး
Posted by Anonymous comments (0)
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားတွင် စိတ်ခံစားမှုများ ချရေးဖို့ တစ်ယောက်တစ်ဝက်ရေးသည့်
သံယောဇဉ်သည် စိတ်၏ မည်သည့်အပိုင်းကို ချည်နှောင်ထားမှန်း မသိသော်လည်း ရုန်းထွက် မရမှန်းတော့ ကျွန်တော်သိပါသည်။
,ယခုအချိန်အထိကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်၏ စမ်းချောင်းလေးမှာ အဖြူရောင် ရေတွေ စီးဆင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါသည် ။
သူမညာဖက်ပါးလေးကို ကျွန်တော် နမ်းမိပါသည် ။ညင်သာနှုးညံ့စွာဖွဖွလေး နမ်းလိုက်မိသည်
ကျွန်တော် စိတ်ကူးဖြင့်ခိုးနမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။အဲလောက်အထိကျွန်တော် ရူးသွပ်ခဲ့ပါသည်။
သူမသည်တစ်ခါတစ်လေ ကလေးအရမ်းဆန်တတ်သလိုတစ်ခါတစ်လေတော့ ခပ်တည်တည်ကြီးလုပ်နေတတ်သည်။
ထိုအချိန်မျိုးတွင်သူမကိုကျွန်တော် ငပေါမလေး ဟုခေါ်တတ်ပြီး သူမက ကျွန်တော့်ကို အရူးကြီးဟုပြန်လည်ခေါ်ဆိုတတ်သည်။
အရူးနဲ့ငပေါဆိုတာဒွန်တွဲနေတာဟုကျွန်တော်ပြောသာအခါ သူမရီ(ရယ်မော) နေတတ်သည်။
ငါလည်း မိုးမြိုမှာကြောက်တယ် ဟဲ့
ဤသို့ဖြင့်...သူမသည် တော်၏။ ဘာမဟုတ်သည့် နေရာ၌လည်း တော်၏။
သို့သော်သူမသည်တစ်ခါတစ်လေ အူကြောင်ကြောင်နိုင်လေ့ရှိပါသည် ။
ဘာအရောင်ကြိုက်လဲဟုကျွန်တော်မေးမြန်းသောအခါအပြာနဲ့ခရမ်းရောထားသော ခရမ်းပြာ ဟုဖြေသည်။
တစ်ခါတစ်လေ စကားကို ဒီလိုမျိုး ခွတီးခွကျပြောတတ်သေးသည်။ ခရမ်းပြာ လို့ဖြေလိုက်ယုံနှင့်မပြီး၊ပိုသေချာအောင်
ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးတည့်ရာကို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပြောလျှင် သူမသည် အရေးပါသော အရာများကို ရိုးရိုးစင်းစင်းပြောသည်။ကျွန်တော်ကချစ်သူတစ်ယောက်အတွက် ဘ၀ကိုစဉ်းစားလျှင် သူမကဘ၀အတွက် ချစ်သူကိုစဉ်းစားသည်။
အိပ်မက်တွေကို မျှားနေတုန်းလား ။
တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုမျိုးလေးလည်း ပေါတောတောနိုင်လိုက်ပြန်သေးတယ်။
သို့သော် သူမနှင့်ကျွန်တော် အိပ်မက်များကို မျှားနေကြတုန်းပင်ဖြစ်သည် ။အခုအချိန်အထိတစ်ယောက်ရင်ထဲမှာတစ်ယောက်
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင် သူမမျက်ဝန်း ညိုညိုလေးအောက်မှာ သူမရယ်သံလေးအောက်မှာ ကျဆုံးချင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး
သူမကတော့ ဘယ်လိုအောင်နိုင်မှုမျိုးချင်ခဲ့လည်းဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ကျွန်တော် ထုံအ ခဲ့ပါသည်။
ဟုတ်လည်းဟုတ်ပေသည် ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က သူမရင်ကိုကျွန်တော်မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ခဲ့သေးပါ။ဒီလိုမျိုး တုံး အ ခဲ့ခြင်းပါ။
သူမသည် ကျွန်တော့်ကို နာကျင်အောင် ပြုလုပ်လှည့်စားနိုင်သော မာယာရှင် နတ်သမီးတစ်ပါးမဟုတ်တာတော့သေချာပါသည်။
ငါ့ကို ဖတ်ပါ ။
ငါနင့်ကိုချစ်တယ်..နင်ယုံလား လို့ကျွန်တော်မေးတိုင်း ယုံဝူး ဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့ ဟုပြန်ဖြေတတ်သော
သူမကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးကို ကျွန်တော်အလွတ်ကျက်ထားစရာမလိုပဲ မှတ်မိနေပေသည်။
သူမရဲ့အမူအရာ လေးများကို ဘာသာပြန်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားရဦးမှာသေချာပေသည် ။
သူမအကြောင်းသည်ကျွန်တော့်အတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်အကြောင်းသည်သူမအတွက်
ပုံပြင်မဆန်သော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည် ။အခုချိန်အထိ
ကိုယ်ယောင်ပြချင်သလိုပြသခွင့်မရသောသရဲတစ်ကောင်လိုကျွန်တော်ချစ်ခြင်းတွေ ဝေတုန်းဝါးတုန်း ။
သူမနှင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြူရောင်စမ်းချောင်းလေးကတော့ စီးဆင်းလို့ကောင်းတုန်း ။
ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုဟာ နင် ဖြစ်ပါစေ ။
Posted by ညီစိမ်း comments (0)
ဖုတ်ဖက်ခါထပြီး ပြန်ကြရုံပေါ့ ။
ပြောချင်တာက ဒီလိုဗျ ။
နံပါတ်စဉ်တချို့ ရေတွက်လို့ မဆုံးခင်မှာပဲ
ခရမ်းရောင်တောအုပ်ထဲကနေ ပြတ် ကျသွားတယ် ။
မိုးတွေ ရွာလာပြန်ပြီ ။
ဟော ..... ကြည့်ဦး ။
လူရှင်းရင် ရောဂါက ဖောက်လာ ။
ကမ္ဘာတခြမ်းနဲ့ ပြက္ခဒိန်တခြမ်း ထားခဲ့ပြီး
ကမ္ဘာတခြမ်းနဲ့ အသက်တစ်ဝက် ပြန်ယူသွားတယ် ။
ဖြစ်ချင်သလိုသာ ဖြစ်စေတော့ ။
အခု ..... နောက် ..... နောင် .....
( တစ်တောလုံးကို တစ်ရောင်တည်း ညီအောင် ထွန်းပြီးမှ
ကြွေ ..... ကြွေ ....... ကျ )
ပြီးသွားပြီ ဆိုမှတော့ နှုတ်ဆက်လိုက်ကြရရုံ ။
ဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ရုပ်သေး အတွက် အမှတ်တရ ခံစားပြီးတော့ ရေးပေးထားတဲ့ ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ် ။
" ကလစ် ... ... ... ပြီးသွားပါပြီတဲ့ "
ဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြတဲ့
ရုပ်သေး နဲ့ မောင်မိုးချို တို့က ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်တရ
ခံစားဖန်တီးပေးခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ် ။
ငါ့ ကို ငါ ပြန် ခိုး တဲ့ ည
မ တော် တစ် ဆ ပါ ပဲ
အဲ ဒီ နေ့ က
ကိုယ့် ကို ကိုယ် ပြန် စိုက် ပျိုး လိုက် ရ တယ်။
ဘာ တစ် ခု မှ မရိုး သား တာ
မ ရှိ ခဲ့ ပါ ဘူး
လော က ဓံ ရှစ် ပါး နဲ့ တ ရား ၀င် ကွာ ရှင်း ခဲ့ တာ ပဲ။
ကိုယ် တိုင် မှား ခဲ့ ဖူး တဲ့
၀ါ ကျ တစ် ကြောင်း
ငါ့ ဦး နှောက် ထဲ မှာ သ တိ တ ရ ရေး မှတ် ထား တယ်။
အ ရှင် လတ် လတ် အ ပြုံး တွေ
အ စိမ်း ရင့် ရင့် မု သား တွေ
ငါ ကိုယ် တိုင် ကြိုး မိန့် ပေး လိုက် ပြီ။
အ ယူ ခံ မ ၀င် လို့
ငါ့ တ ရား ငါ စီ ရင် ချက် ချ ခဲ့ တာ ပဲ
၀မ်း နည်း စ ရာ မ လို ဘူး
အ ဓိ ပ္ပာယ် မဲ့ ကျ ရှုံး ရ တာ မှ မ ဟုတ် တာ။
ယော င်္ကျား က မျက် ရည် မ ကျ ရ ဘူး တဲ့ လား
ငါ့ မာ န ငါ ပြန် ခိုး ယူ လို့
အ ကောင် အ ထည် ဖော် ပြ မယ်။
အဲ ဒီ နေ့ က လေ
ကိုယ့် ကို ကိုယ် ပြန် စိုက် ပျိုး လိုက် ရ တာ အ မှန်။ ။
ဝဋ် အကြီးကြီး လည်တယ်
ဝေး ကို ဝေး ရ မှ ….. ဖြစ် ကို ဖြစ် ရ မှာ ဆို တော့
လေ ယာဉ် ပျံ ဟာ …… ဦး ထုပ် ထဲ က ထွက် ကျ လာ
ဒီ မှာ . . . . . . . .
ခါး စည်း ပြီး တော့ လွမ်း ( နေ ရ ) တယ် ၊၊ ၊၊
<<- ဇာတိ --->
ကို ညီစိမ်း ရဲ့ ဝဋ်အကြီးကြီးလည်တယ် ကဗျာ အား မိမိခံစားမှုဖြင့် ပြန်လည်ခံစားပါထားတာဖြစ်ပါတယ်၊၊ ၊၊
Posted by ဆူးခက်မင်း comments (0)
စဖွင့်ကတည်းက ၊ အစနဲ့ အဆုံး မတူဘူး ။
အဆုံးအစ မရှိဘူး ၊ မရှိတာတွေ မတူဘူး ။
နင်နဲ့ ငါနဲ့ ၊ ငါနဲ့ နင်နဲ့ ၊ ( အိုး ) ၊ မတူဘူး ။
တူတူ ရေ ၊ ၀ါး ၊ မတူဘူး ။
မတူတာတွေ နဲ့ တူတာတွေ ၊ မတူဘူး ။
တူတာတွေနဲ့ မတူတာတွေ ၊ မတူဘူး ။
မတူတာတွေနဲ့ မတူတာတွေ ၊ မတူဘူး ။
တူတာတွေနဲ့ တူတာတွေ ၊ မတူဘူး ။
တူတူ မတူတူ ၊ မတူဘူး ။
တူတူ မတူတူ ၊ မတုဘူး ။
တုတု မတုတု ၊ မတူဘူး ။
" တူ .... တူ ...... တူ ......... တူ .... "
" လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုလိုသော ကဗျာဆရာမှာ ... တူတူပုန်းတမ်း ကစားနေပါသဖြင့် ... "
ဟုတ်ကဲ့ဗျ . . . သွားတော့မှာပါ
ရောက်မယ်ထင်ပါတယ် . .
ခဏနော် . . . ညမချုပ်သေးလို့
ဟော . . . .
ဟုတ်ဘူးဗျ . . . ရောက်နေပါပြီ
နေဦးနော် . . . ညစင်စင်ချုပ်ပါပြီ
သွားပါပြီ . . .
ခင်ဗျား ပြက္ခဒိန်လား ..
ရော့ ..... ဒီမှာ ... ။
သတိရတိုင်း ထုတ်ထုတ်လှန်လို့ ရတယ် ။
လူကြားထဲတော့ ထုတ်မလှန်နဲ့ ။
လူသိရှင်ကြား ထုတ်မလှန်နဲ့ ။
လူမသိ သူမသိ ။
လူမ သိ ၊ သူမ သိ ။
လူမ တစ်ယောက် ဖြစ်သော သူမ ကိုယ်တိုင် သိ / မသိ ။
လူထီး တစ်ယောက် ဖြစ်သော သူထီး ( ကျွန်တော် ) ကိုယ်တိုင် သိ / မသိ ။
မသိလိုက် မသိဖာသာနဲ့ပဲ ။
ရော့ ..... ။
မထွန်းနဲ့ အလင်းတိုင်တွေ. . မတွန်းလိုက်နဲ့
မတွန်းနဲ့ ကျွန်တော်နောက်ကျောကို. . မထွန်းလိုက်ပါနဲ့
ရောက်ရာ ကို ပေါက်ခဲ့ပြီးမှတော့
ပေါက်ရာနေရာမှာ ပွင့်မှာပါ . .
ကဲ ပွင့်သွားတော့ . . .
ကျည်းဘောင်သက်သက် တံခါးပေါက်ရေ . . .
ငါ့ခြေလှမ်း ငါပြင်ပြီး ၊ ငါ့ အခန်း ငါဝင်ခဲ့တယ် ။
ငါ့ ခန္ဓာ ငါ သယ် ၊ ငါ့ နားသယ်စပ် ငါ နမ်းခဲ့ရ ။
ငါ့ မျက်လုံးနဲ့ ငါ မြင်ပြီး ၊ ငါ့ လက်ဖ၀ါးနဲ့ ငါ နွေးထွေးအေးစက် ။
ဘယ်မှာလဲ .... ။ ဘယ်မှာလဲ .... ။
ဒီနေ့ မဟုတ်တဲ့ ၊ မနေ့က ရဲ့  မနက်ဖြန်တွေ ။
ဘယ်မှာလဲ ... ။
ဘယ်မှာလဲ ၊ ဘယ်မှာ လဲနေလဲ ။
ဘယ်မှာ ၊ ဘာတွေ လဲနေလဲ ။
ပုလင်းတွေလား ၊ အတင်းတွေလား ။
အရိုးတွေ ရင့်နေတာလား ၊ သူခိုးတွေ မြင့်နေတာလား ။
ဒီနေ့မှာ စပြီး ၊ မနေ့မှာ ဆုံးတာတွေ ။
မနေ့မှာ စပြီး ၊ ဒီနေ့ မှာ စတာတွေ ။
ဒီနေ့ နဲ့ မနေ့မှာ ၊ မနေ့ နဲ့ ဒီနေ့ ၊ ဒီနေ့ နဲ့ မနေ့ ။
မနေနဲ့ .... ဒီနေ့  .. ။
ဒီနေ့ မနေနဲ့ ... ။
မနက်ဖြန်ရော .... ။
မနက်ဖြန်ကျရင် ပြန်လာကြည့် ။
ဒီနေ့ဆိုတာကို မနေ့ကအတိုင်း ၊ မနက်ဖြန်မှာ တွေ့ ရလိမ့်မယ် ။
( ဆူးခက်မင်း + မောင်မိုးချို )
ပိုး မျှင် ရေ
ပြော ကောင်း ဆို ကောင်း ပြော ချင် တယ်
၀တ် မှုန် က လေ ပြည် ကို ပြော သ လို
သစ် တော က မိုး ဥ တု ကို ပြော သ လို
ငါ့ က နင့် ကို ပြော ချင် တယ် ။
အ ခု ဆို ရင်
ငါ့ ရေ သောက် မြစ် တွေ က
ဆုတ် ဖြဲ ခံ နေ ရ တာ နဲ့ တင်
ဥာဏ် ရည် ဥာဏ် သွေး တွေ နိမ့် ကျ ကုန် ပါ ပြီ ။
တိမ် တွေ မ ဖြူ တော့ ဘူး ဆို တဲ့
တစ် နေ့ က
နင် မ ဟုတ် ဘူး လား...ပိုး မျှင်
ငါ့ အ သိ ဥာဏ် တွေ ထဲ
ပြေး လွှား က ခုန် နေ ခဲ့ တာ
ကြည် နှုး မှု တေး သွား တွေ က
မှတ် သား ဖွယ် ရာ မိုး ရေ ချိန် တွေ လို
တစ် ချက် တစ် ချက် အုံ ဆိုင်း လာ တယ်
နင် ဆို တာ ငါ မ သိ သေး တဲ့
ငါ့ ရင် ဘတ် ထဲ က နို ၀င် ဘာ
ရေ စက် မ ပါ တဲ့ မိုး တွေ
ဒီ နေ ရာ မှာ မ ရွာ နဲ့
နွေ စက် လက် စို လည်း
ငါ သွေ့ ခြောက် ဖို့ ရဲ တယ် ။
ခေါ် ဆို ရ မ ခက် ခဲ လောက် ပါ ဘူး
မ မြင် ကွယ် ရာ မှာ
တစ် ရာ သီ စာ ပုန်း နေ တော့ မှာ လား
နင် ကိုယ် တိုင် ဖန် ဆင်း အပ် သော
ရ နံ့ အ ပြည့် နဲ့ နှင်း ဆီ တစ် ပွင့်
ငါ့ ရင် ဘတ် မှာ လာ စိုက် ပေး ပါ
ငါ့ ကို လာ ပြီး တော့ ရစ် ပတ် လှည့် ပါ ။
ပိုး ချည် မျှင် နဲ့ ယက် လုပ် ထား တဲ့
နှုတ် ခမ်း ပါး လေး ရေ
စိတ် ရှိ လက် ရှိ သာ ပြော ခွင့် ရ မယ် ဆို ရင်
" ချစ် တယ် " ဆို တဲ့
စ ကား တစ် ခွန်း ထက် ငါ ပို မ ပြော ဘူး
ငါ့ ဂူ တံ ခါး က မင်း မန္တာန် နဲ့ ဖွင့် မှ ရ မှာ မို့ ပါ ။
ပြီး ပြီ လား.....ပြီး ပြီ တဲ့ လား
ဒါ ဆို.....နင့် ဓါး ကို သိမ်း တော့
တံ ခါး တွေ ဖွင့် မီး တိုင် တွေ ထွန်း
ဗုံ သံ တွေ ကို ခုန် ပေါက် စေ လိုက်
အဲ ဒီ တေး သွား နဲ့
ငါ.....စီး ချင်း ထိုး မ လို့
ဟင်း လင်း ပွင့် ကြင် နာ ခြင်း တွေ နဲ့
ပ ညတ် တော် တွေ မ ပါ ပဲ
သေ ချာ တဲ့ အ က္ခ ရာ တစ် ခု ကို
သိပ် သည်း ဆ လေး နက် သွား စေ ဖို့
ပိုး မျှင် ရေ..........ငါ တို့ နှစ် ယောက်
တစ် ယောက် ရင် ကို တစ် ယောက် တူး ဆွ ကြ မယ် ။
အ ရောင် မဲ့ ဒြပ် မဲ့ ဖြစ် သော ပိုး ချည် မျှင် မ လေး ရေ
ပိုး တုံး လုံး လေး တွေ
လိပ် ပြာ ဖြစ် လာ မယ့် နေ့ ကို
အ မှန် တ ကယ် လူ လုံး လှ စေ ဖို့ အ တွက် ။
( ရိုးရာ+အမည်မဲ့ )
ကြယ် ပန်း လူ
ပန်းသီးတစ်လုံး / ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပါးစပ်ရာဇ၀င်
သီးတဲ့ အဲ့ဒီ ပန်းသီးတစ်လုံး ...
ဘယ်သူမှ မလောင်ကျွမ်းသေးတဲ့ မီးနဲ့ ငါ စတင်လောင်ကျွမ်း ....
ဒီလိုနဲ့ .. ပြေပြေပြစ်ပြစ် ခါးသီးခဲ့ရပါတယ်၊၊ ၊၊ ( ဇာတိ )
ပတ်ပတ်လည် သုံးဆောင်ပြီး လွှင့်ပစ် ..
ခင်ဗျားတို့  သိတဲ့ အတိုင်း ..
ကျွန်တော်က သိတဲ့ အတိုင်း .. ( သရဲစိမ်း )
ဒီနေရောင်နဲ့ အရင်က ပတ်သက်ဖူးပါတယ်
အဆိပ်ရှိရခြင်းနဲ့ ငါကပဲအချစ်ဖြစ်တည်စေမယ် ( လူကြီးမင်း )
တစ်ချို့တစ်လေ ငိုက်မြည်းနေတာ ကလွဲရင်
ဒိုင်ယာရီ အသစ်တွေ ထပ်မရေးတော့ဘူး ။ ။ ( အမည်မဲ့ )
ပန်းသီး ပန်းသီးနဲ့ ဖြန်းဖြီးပြီး ၊ ပြော
နေတာတွေ ၊ ရပ် ။
ပြောဖို့ လိုရင် ၊ လိုတာတွေပဲ ပြော ။
" လုံခြုံမယ့် အိမ်လိုချင်တယ် .. "
လူတွေ ၊ လူတွေ ။
ငါ့ လည်ပင်းကို ဖြတ်နင်းသွားတဲ့လူတွေ ။
" မိတ်ဆွေ .. ကျေးဇူးပြုပြီး .. ပန်းသီးတစ်လုံးလောက် .. " ။ ။ ( ဆူးခက်မင်း )
Posted by သုဏော်စိုင်း comments (0)
ဒီနေ့့
ဒီလိုဆုံတွေ့ ခွင့်ရတာ မင်္ဂလာပါ
အဲသည်လိုနဲ့ ကဗျာကို စဖွဲ့ လိုက်လေရဲ့
အရာအားလုံးဟာ တသားတည်းဖြစ်ဖို့ 
နမောတဿရွတ်လို့ညွတ်တွားရအောင်
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိပါဘုရား။
ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိပါဘုရား။
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိပါဘုရား။
အူဝဲ. . . .
ကြေးစည်သံက မျက်ရည်ကို ညှစ်ထုတ်ပြန်တယ်...
စိုသောလက် မဆန့် ခင်လား
ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ဒွေးရောယှက်တင်နေရတယ်
ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာရဖို့ 
နယ်ပယ်ချဲ့ ထွင် ကျွန်ခံခြင်း
ငွေကြေးနဲ့ ရွှေ့ လို့ ရတဲ့ ဇယ်ရုပ်တွေဟာ
အဲသည်လိုနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို စခဲ့ကြတယ်
ငါ့သမီးလေးတော်လှ တော်လှနဲ့ 
နောက်ဆုံးပေါ် မော်ဒယ် လန်းလန်းလေးနဲ့ 
ကဲ သားတို့ ၊ သမီးတို့ဒီပုံစံလေးကို ဖြည့်လိုက်ကြနော်
ဘတ်စ်ကားတွေထဲကို ချွေးစက်တွေရဲ့ 
ပါးစပ်မပါတဲ့ ညစာစားပွဲတွေနဲ့ 
webcam နဲ့chatting ထိုင်
အကြည်ဓာတ်ကလေးလွှာခံထားရတဲ့ ကျွန်တွေရှေ့ မှာ
ရက် ၂၀ နီးပါးရှိပြီ
ကြွက်ချေးတွေထဲရောနေတဲ့ ဆွမ်းဆန်နဲ့ 
နှမ်းတစေ့နဲ့ ဆီဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်း
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်က ဘူဖေးစနစ်လေ
တနေ့ လုပ်မှ တနေ့ စားရတာဆိုတော့လည်း
ခပ်ဝေးဝေးမှ ရှိရက်နိုင်လို့လား ..... ။
အဲဒါ ``ဘုံကြိုးပြတ်တဲ့ ဒေ၀ီနတ်´´
နင် မသိလိုက်တဲ့ စက္ကန့် ထူထူကြီးထဲမှာ ငါ့ သေရာသေကြောင်းရှိတယ်။
တောင်ပေါ်မှာ တသွင်သွင် လွင်တောက်
ငါ့ကမှ တလင်းကို ရောက်စေချင်ခဲ့တာလို့
မောင်းခတ် ကြေငြာထားဦးမတဲ့လား ..... ။
ရင်ဘတ်က ကြားရုံလေးတောင် မအော်နဲ့တော့
ဆူးလွန်ရှင်းတောက် လွန်းတယ် ... အဲဒီ အသံတွေက ... ဆူးလွန်ရှင်းတောက် လွန်းတယ်။
လက်တန်နှစ်ဖက် သေသွားပြီ .....
ပြောချင်လွန်းလို့ ပြောပြရမယ်ဆိုရင် ..... ..... .....
ငါက ဒေါင်ဒင်မြည်တဲ့ နာရီအိုပါ။
ငါ့မှာကောက်ရတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်တောင် မရှိခဲ့ရဘူး။
နောက်တော့လည်း ပြောဦးပေါ့ `` မိဝတီ´´
ငါက စာမျက်နှာ ၈၀ စာ ရယ်စရာဟာသ .....
အဲဒီမှာ အစေ့အငုံ တစ်ရာ၊တစ်ထောင်လောက်
မှောက်လျက်လဲတာ နင်မှမမြင်လိုက်ပဲကိုး ..... ..... ။
အားလုံးမေ့သွားတဲ့ သေပြီးသား သစ္စာပဲ။
`ငါ ... နောက်ထပ် ... ဘယ်တော့မှ ... ထပ်မရွတ်ဘူး´။
နင် မသိသမျှ ငါ့အကြောင်း ဒါအကုန်ပဲ တဲ့လား။
နောက်ထပ် ... ထပ်ပြောရကြေးဆိုရင်
` ၁၆၈ နာရီထက် နင်ပိုလင်းနိုင်ပါစေ´ မိဝတီ။
၊နောက်၊ ငါ့ အင်္ကျီစကို၊
ငါ့ နောက်ကျော ကို။
ငါ လည်း ငါ့နောက် မလိုက်နဲ့။
ဒါမှ ... ငါ
ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ ရုပ်သေး ပြောဖူးတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေး ဖြစ်ပါတယ်..
ငါ ..... ကဗျာဆရာ
ဘောပင် နဲ့ စာအုပ်ပါ
အဲဒီမှာ - ၂၄ ပစ္စည်း မရှိဘူး
- သစ္စာနီ ၀တ္ထုတို မရှိဘူး
- ပိုးဟပ် နဲ့ ချ တွေ မရှိဘူး
- မြေနံ့ မရှိဘူး
`ခွင့်ပြုပါဦး´ ..... `ခင်ဗျားဆိုရင်လည်း လေစိမ်း၊ လေနီတွေ ရှူချင်ပါ့မလား´
`ထားလိုက်ပါ´ ..... `ခလုတ်ဆွဲညှစ်တိုင်း ကျည်လိုက်ချင်မှ လိုက်မှာပေါ့´
ဒါတွေက သင်္ကေတ၀ါဒီ ဟုတ်မဟုတ်မသေချာဘူး။
တံခါးမခေါက်ဘဲ ၀င်လို့ရတဲ့ မြို့ရိုးမှာ
ကိုယ့်နှာခေါင်းကိုယ် ငှားပြီး ဖြစ်ပျက်ရှုတာမှမဟုတ်တာ။
`ခွင့်ပြုပါဦး´ ..... `ခင်ဗျားလည်း ပျင်းနေရောပေါ့´။
နှစ်ခါ ခွဲပြီး က မယ် ။
အသင် မေ့နေလား၊ မေ့လျော့ချင်ယောင်ဆောင် နေသလား။
``ဟာ .......... ´´
ည ၊ ခြောက်ကြိုးတပ်ဂစ်တာ နဲ့ အစိမ်းသေ
စက္ကူပန်း ရနံ့ ။
ပေတစ်ရာပေါ် လွှတ်ကျောင်းထားတဲ့ နွားတစ်ကောင် ။
မျက်ကြည်လွှာ ပျက်စီးမှုရောဂါ ။
မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း မဟုတ်တော့တဲ့ အရေပြား ။
ဇယားငြိခြင်း ၊ အဖျားမိခြင်း ။
အလှပဆုံး ၀င်္ကဘာ ။
ခြောက်ကြိုးတပ်ဂစ်တာကို ငါတီးတယ် . . . .
ခေတ်တစ်ခေတ်၏ လရောင်ပန်သော နှင်းဆီ (၁)
၁၉၈၅ လွန်ခေတ် ..
သူမရဲ့ အပြုံးခြောက်ခြောက်မှာ မိုးသံလေသံကင်းတယ် ...
လွင်ပြင်သံဆူတဲ့ ရင်နဲ့ ကြည်တယ် ...
ကျွန်တော် လျှောက်မဲ့လမ်း ... သူမကျောနဲ့ ခင်းလို့ပေါ့ ...
အဲဒီနေ့ နာရီကိုမော့ကြည့်တော့ ကြယ်တွေ စင်စင်ပြုံးလို့ ...
စဉ်စားကြည့် ရင် မနေ့ကလိုပဲ .. ဆူးနစ်လို့
၅၂၈ ထက် ၁၅၀၀ ကိုပိုခဲ့လို့လေ
ဘ၀ဒီရေက ကြမ်းပ ..
သူမကို လွမ်းတဲ့လွမ်းတွေ လှိုက်တက်လို့ပေါ့ ......
ဈေးဗန်းခေါင်းမရွက်ပေမဲ့ .. တူသံပေသံတွေနဲ့ သူမလေ
လခစားနဲ့ကျွေးခဲ့တဲ့ နေ့တွေဟာ လတ်ဆတ်လို့ရယ်
ဘယ်အချိန်ပြန်မယ်မသိတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်လေ
သူမရဲ့ ပါးရေတွန့်တွေ နဲ့ အပြုံး ဆူဆူညံလို့ ...
တမ်းတနေတယ် .. ကိုယ်အပြစ်နဲ့ကိုယ် တိတ်တိတ်ညံဆဲ
ကာလဒေသ မူးမူးနဲ့ အနည်ကျတယ်
ကန္တာရထဲ လှေတစ်စင်းနဲ့ အလည်ထွက်သလိုပေါ့
ဒီလို နဲ့ ကျွန်တော် ဘ၀ နေညိုတယ် ....
မိုးသံလေသံ ကင်းတဲ့ သူမ အပြုံးခြောက်ခြောက်တွေကို လွမ်းရဲ့
သားချော့တေးတွေညံတဲ့ ၁၉၈၅ လွန်ခေတ်သို့ ......
ခေတ်တစ်ခေတ်၏ လရောင်ပန်သော နှင်းဆီ ( ၁ )
( AD – 3009 )
Nuclear ဓာတ်ငွေ့ တို့ ဖြင့် ဆွတ်ပျံ့ သော
Robot ကမ္ဘာသစ်တွင် ၊ စက်ရုပ်ဆန်သော ယန္တရား
တို့ ၊ တိတ်တဆိတ် ရွေ့ လျား ။
ဟိုးးးးးးးး ၊ ရှေ့ မှာ
ဓာတ်ပေါင်းဖို တစ်ခု လှုပ်
လှုပ် ၊ လှုပ် ၊ လှုပ် ၊ လှုပ်
နီ ၊ ၀ါ ၊ ပြာ ၊ စိမ်း ၊ နက် ၊ ဖြူ ၊
( ဘာရယ် မသဲကွဲသော အရောင်တချို့  ) ။
လွင့် ဖြာ လှုပ် ခတ် ။
မျက်လုံးသေတွေတောင် ၀ိုင်းစက် ။
၀ိုင်း / စက် ။ စက် / ၀ိုင်း ။
စက်ဝိုင်း သဏ္ဍာန် ၊ ၀ိုင်းစက်စက် မျက်လုံးသေတွေ
အစိမ်းလိုက် ၊ လိုက်စိမ်းကြ ။
လွန်းပျံယာဉ်တွေ ၊ ရုတ်တရက်
တစ်ရက် ၊ တစ်ရက် ၊ တစ်ရက် ပြီး တစ်ရက်
စကြ၀ဠာ အပြင်ဘက် တိုးထွက် ။
ထိုးထွက် ၊ ဖောက်ထွက် ။
ဘေးတိုက်ရွေ့ လျားနေတဲ့ …
တစ်ပေါက်ချင်း ၊ တစ်ပေါက်ချင်း
ရွာချ / ရွာကျ ။
သတ္ထုရနံ့တို့ မွှမ်းထုံသော ကမ္ဘာ၏ နောက်ဆုံးည ။
အားလုံး ၊ အား ……….. လုံး ။
တမလွန် တံခါးဝမှာ ၊ စောင့်ဆိုင်းနေကြ ။
( ကိုယ်တိုင် အပါအ၀င် )
ထို - စဉ် ။
ထို / စဉ် ။
အားကောင်းမောင်းသန် Black Hole တို့ ။
အနီးကပ်ဆုံး နီးကပ်လာကြ ။
နီး - ကပ် - လာ - ကြ ။
အရှင့် ဂုဏ်တော်တွေနဲ့ ချီးမွမ်းလှည့်ခြင်းငှာ ..
မစွမ်းတော့ဘူးလား သခင် ။
အမှောင်ထုတို့ ကြီးစိုး ။
အားလုံး ၊ အား …….. လုံး ..
တွင်းနက်ကြီးရဲ့  ဆွဲငင်မှုကို လွန်ဆန်ဖို့ အားမရှိ ။
မရှိ ၊ မရှိ ၊ မရှိခဲ့ ။
နစ်ရှေး မသိလိုက်တဲ့ လရောင်တချို့ 
ဖြာ ကျ ၊ ဖြာ - ကျ ၊ ဖြာ/ကျ
ကမ္ဘာ နှစ်ခြမ်း အက် ။
ထို အက်ကွဲကြောင်းကြားမှ ထိုးထွက်လာသော ။
ထိုး ထွက် လာ သော ။
နှင်းဆီ တစ်ပွင့် ။
ငြိမ်းချမ်းရေး နှင်းဆီ လား ?
သေမင်းတမာန် နှင်းဆီ လား ?
မ / ကွဲ ပြား ။
လရောင် ဖြာကျနေသော သတ္ထုကမ္ဘာရဲ့ 
ငွားငွားစွင့်စွင့် ပွင့် ၊ ပွင့် ၊ ပွင့် လန်း ၏ ။
အားလုံး ၊ အား ………. လုံး
လရောင်ဆမ်းသော နှင်းဆီရဲ့  ညှို့ ငင်မှုကြား
ရီဝေ တိမ်းမူး ။
Black Hole ကို တဆိတ် မေ့သွားကြ ။
ကစင့်ကလျား ပြေးလွှား ….
နှင်းဆီ ရဲ့  လူသားဆန်တဲ့ ရနံ့ ကို ငတ်မွတ်တောင့်တ ..
အတ္တတစ်ပိုင်း လွှမ်းခြုံထားတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့
Black Hole ထဲ စိတ်လိုလက်ရ ပြေးဝင်သွားကြ ။
နှင်းဆီ တစ်ပွင့်၏ ညှို့ ငင်မှုဖြင့်
ကမ္ဘာတစ်ခု အဆုံးသတ်ခဲ့၏ ။
Posted by နေကျယ်ဝန်း comments (2)
ဟိုးရှေးရှေး ဒီအချိန်လောက်တုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရှိတယ် ။
အဲဒီကောင်လေးက တစ်နေ့တခြား အသက်ကြီးလာပြီး အနှစ်ခြောက်ဆယ်လောက်ကြာတော့ အဖိုးကြီး ဖြစ်လာတယ် ။
သူ သေခါနီး ကျတော့ သူ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားကို ခေါ်ပြီး သူအရမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အမွေအဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့တယ် ။
အဲဒီအမွေက ပြည်သူ့ နီတိ အဆုံးအမ သြဝါဒ ကျမ်း စာအုပ်ကြီး ။
အဖိုးကြီးရဲ့သား ကောင်လေးလည်း အထဲမှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိလိုချင်တာနဲ့ စာအုပ်ကို လှန်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ စာမျက်နှာ အိုမင်းလို့ ခြစားထားတဲ့ စာရွက်ပြဲရာအချို့ရယ် သူ့အဖေ အနှစ်နှစ်အလလ က ဖတ်သားမှတ်ရှုထားပြီး ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ notes တွေ တပုံတခေါင်းတွေ့ရတယ် ။
ကောင်လေးလည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိသေးဘဲ စာအုပ်ကို အချိန်အနည်းငယ် ဖတ်ကြည့်နေမိတယ်။
သူသတိဝင်လို့ သူ့အဖေကို ကြည့်လိုက်ချိန်မှာပဲ သူ့အဖေက တမလွန် ခရီးတဝက်စနေပြီ ။
အဲဒီလိုနဲ့ ကောင်လေးလည်း အဲဒီ စာအုပ် ထူကြီး ကို နေ့မအား ညမနား အခန်းတွင်းအောင်းပြီး တရှုမနား လေ့လာပစ်လိုက်တယ် ။
အားသွန်ခွန်စိုက် ကျင့်ကြံပစ်လိုက်တယ် ။
တစိုက်မတ်မတ် မွေးမြူပစ်လိုက်တယ် ။ အဲဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ တော်တော်ကလေးကို အဆက်အသွယ်ပျက်သွားတယ် ။
ရက်အတော်ကြာတဲ့ အခါ စာအုပ်ကြီးဖတ်လို့ ပြီးစီးသွားတယ် ။ သူ့ခေါင်း သူ့ဦးနှောက် သူ့နှလုံးသားထဲမှာလည်း သြဝါဒတွေ သံမှိုရိုက်ခတ်ထားသလို မြဲမြဲမြံစွာဆွဲကပ်သွားတယ် ။
ဒီစာအုပ်က အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပဲ ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်ကို လူတွေ သိအောင် ငါ ပုံနှိပ်ပြီး ဝေမျှသင့်တယ် လို့ အောက်မေ့ပြီး စာအုပ်ထုတ်ဖို့ အကြံပေါ်လာတယ် ။
ဒါပေမယ့် သူ နေထိုင်တာ ရွာမှာ မို့လို့ ပုံနှိပ်တိုက် မရှိဘူး ။
ဒါကြောင့် ပုံနှိပ်တိုက်ရှိတဲ့ အနီးဆုံးမြို့ကို တက်ဖို့ ကြံစည်တယ် ။
ပုံနှိပ်တိုက် ရှိတဲ့ အနီးဆုံးမြို့ က သူတို့ ရွာနဲ့ ဆို လှေတစ်တန် မြင်းတစ်တန် တောဖြတ် တောင်တက် သွားရမှာ ။
ဒါပေမယ့် သူ စိတ်မပျက်ဘဲ သူ့အဖေ အမွေပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ် လူတွေဆီ ဖြန့်ဝေတာ သူ့အဖေလည်း ဝမ်းသာမှာပဲဆိုပြီး ကြည်နူးနေရင်း အထုပ်အပိုးတွေ ပြင်ဆင်တယ် ။
လမ်းခရီးရောက်တော့ သူ တစ်ယောက်တည်း မချွန်တတ်ချွန်တတ် လေချွန်ရင်း ပျင်းပျင်းရှိတာ နဲ့ လျှောက်စဉ်းစားမိသွားတယ် ။
သူ့အဖေ ရေးသားထားတဲ့ notes တွေ ၊ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေက အမှန်တကယ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား ။ လူသားစင်စစ်တွေနဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လား ဆိုပြီး တောင်တွေးမြောက်တွေး တွေးမိတယ် ။
အဲဒါနဲ့ပဲ လမ်းသွားရင်း လူတွေအကြောင်း တစေ့တစောင်း အကဲခတ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။
ဒီလိုနဲ့ ရွာငယ်တစ်ရွာကို တည်းခိုဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ် ။
အဲဒီရွာမှာ တစ်ညအိပ် ပြီး ခရီးဆက်ထွက်လို့ ရပေမယ့် ရွာကလူထုကို အကဲခတ်ချင်တာနဲ့ ၃ ၊ ၄ ရက် ဆက်ပြီး နေဖြစ်လိုက်တယ် ။
နောက်နေ့ ခရီး ဆက်ထွက်တဲ့အခါ စာအုပ်ထဲက စာရွက် ၁ ရွက်ကို ငါ့အဖေ အမှတ်မှားတယ် ထင်တယ် ဆိုပြီး ဆွဲဆုတ်လိုက်တယ် ။
အတန်ငယ် ခရီးပေါက်တဲ့အခါ မြို့ငယ်လေး တစ်မြို့ကို ရောက်လာပြန်ရော ။
မြို့ က နဲနဲကလေး ကျယ်ဝန်းတာနဲ့ သူ ၁ ပတ်လောက် နေသင့်တယ် ထင်ပြီး နေလိုက်တယ် ။
အဲဒီမြို့ က ပြန်ထွက်လာတော့ အဖေ အမှတ်မှားပြန်တယ် ဆိုပြီး ၂ ရွက် ဆုတ် လိုက်ပြန်တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ သူ့ ခရီးအဆုံးဖြစ်တဲ့ မြို့က ပုံနှိပ်တိုက်ရှေ့ ရောက်သွားတယ် ။
တိုက်ထဲ ဝင်မယ် ကြံခါနီးမှ အတွေးတစ်ခုဝင်လာ စိတ်ပြောင်းသွားပြီး ပုံနှိပ် စာအုပ်ထုတ်မယ့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။
အဲဒါနဲ့ပဲ သူနေထိုင်တဲ့ ရွာလေးကို ဘယ်နေရာမှာမှ တထောက်တနား ဝင်မနားတော့ဘဲ တန်းတန်းမတ်မတ်
အိမ်ပြန်လာလိုက်တော့တယ် ။ ။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ခုနက အချိန်လောက်တုန်းက ရွာတစ်ရွာ မှာကောင်လေး တစ်ယောက်ရှိတယ် ။
အဲဒီကောင်လေးက တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာပြီး အဖိုးကြီး ဖြစ်လာတယ် ။
သူ သေခါနီး ကျတော့ သူ့ ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားကို ခေါ်ပြီး အမွေပစ္စည်း တစ်ခု ပေးခဲ့တယ် ။
အဖိုးကြီးရဲ့သား ကောင်လေးလည်း တဖြည်းဖြည်း အသက်ကြီးလာပြီး အရေခွံရှုံ့ပွအဖိုးကြီးဖြစ်လာပြန်တယ်။
သူလည်းပဲ သေခါနီး ကျတော့ သူ့ သားကို ခေါ်ပြီး အမွေပစ္စည်းတစ်ခုပေးခဲ့တယ် ။
အဖိုးကြီးရဲ့သားလည်း အထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ စာအုပ်အဖုံးကို လှပ်ကြည့်လိုက်တော့
အထဲမှာ မာတိကာ ကလွဲပြီး စာရွက်တစ်ရွက်မှ မရှိဘူးတဲ့ ။
လေးထောင့်ဆန်ဆန် ထောင့်မှန်စတုဂံပါပဲ ။
ဝေခွဲလို့ မရလိုက်ပုံများ ..... .....
အသားထဲကို သံချွန်တွေ ရိုက်သွင်းပြီး
ချုပ်နှောင်ခံထားရတာကိုတောင် မေ့လို့ ။
တေးသံတွေကျကွဲသွားသလို ငြီးငြီးစီးစီးပြက္ခဒိန်တွေကို စုတ်ဖြဲနေရတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊၊ နီယွန်မီးရောင်ကိုမှ ညလို့ထင်တဲ့ လူငယ်တစ်အုပ် ဂစ်တာတစ်လက်ကို ကျောပိုးပြီး ထွက်ခွာသွားကြပြီ ထင်ရဲ့၊၊မီးရောင်တွေက ပျိုးပျိုးလက်လက် သီဆိုနေကြမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှောင်နေမှန်းသိရတယ်၊၊ ငွေရောင်တွေသွန်းထားတဲ့ လရောင်တောင်မှ သူ့အလင်းလေးပျောက်ဆုံးဖူးသေးတာပဲ၊၊ဘယ် ညလယ် မဆို တစ်ချိန်ချိန်တော့ လကြတ် ဖူးကြမှာပါပဲ၊၊ ပြက္ခဒိန်တွေ ကျကွဲသွားသလို ငြီးငြီးစီးစီး တေးသံတွေက ငါ့ညလေးကို စုတ်ဖြဲနေကြတာ ကြာပြီ ထင်ပါရဲ့ကွယ် ၊၊
အလင်းတွေ ပေကျံရင်း သေဆုံးသွားရတဲ့ ညရဲ့ဈာပနကို လူတွေက ဘာကြောင့် နံနက်ခင်းလို့ ခေါ်ကြတာလဲ၊၊ငှက်ကလေးတွေ နောက်ပြောင်နေမှ ညလေးရဲ့ ဈာပနကိုဖွင့်ဖတ်မိတယ်၊၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး
ကိုရောက်သွားပေမယ့် ကော်ဖီတွေက ငါ့လည်ချောင်းကိုသောက်သုံးသွားတယ်၊၊ကားမှတ်တိုင်လေးက ခလုတ်လာတိုက်တာ့မှ ပန်းလေးပွင့်နေမှန်းသိရတယ်၊၊ကမ္ဘာဦး မဟုတ်ပါပဲ ပန်းပွင့်လေးနားက သူတွေပျောက်ဆုံး
သွားတယ်၊၊သူမ ဝတ်စုံလေးက အစိမ်း ၊ ကောင်းကင်အစိမ်း ၊ မြေညိုလမ်းလေးလည်း အစိမ်း ၊ မျက်ဝန်းအစိမ်း ၊တစ်လောကလုံး အစိမ်း ၊၊ မေဂျူနို. . . နင့်ရဲ့ အငွေ့အသက်နဲ့တင် ငါ့ညလေး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပြီကွယ်၊၊
ပင်လယ်ခေါင်မှာ ကမ်းမပျောက်တော့ဘူး ၊၊ မှတ်တိုင်တွေ တစ်စင်းပြီး တစ်စင်း ရွေ့လျား ၊ လိုင်းကားလေးပေါ်က ရုံးတက် ၊ ရုံးဆင်း မျက်ဝန်းလေးကို ရက်ပေါင်းများစွာ ငှားဖတ်နေမိရုံ. . . . ၊၊ မျက်တောင်လေးရဲ့ လေတိုက်နှုန်းက ကိုယ့်ဘက် ရောက်မလာပေမယ့် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ငေးနေမိရုံ . . . ၊၊ ရုံးပိတ်ချိန်လေးထဲက ညနေမှာ ပြတင်းပေါက်လေးကို မျှော်နေမိရုံ. . . . ၊၊ဒိုင်ယာရီလေးလည်း သော့မခတ်ဖြစ်သေးပါဘူး ၊၊ မေဂျူနို. . . ဘယ် ဇာတ်ဆရာပဲရေးရေး. . . ဒီဇာတ်လမ်းပေါ်မှာပဲ လျှောက်ချင်တယ်ကွယ် ၊၊
သန်းခေါင်ယံ မတိုင်ခင်က အိပ်ရာဝင်သီချင်းတွေတောင် စီရရီ အိပ်ရာဝင်ကုန်ကြပြီ ၊၊ အိပ်လို့ မရတဲ့ ညနဲ့ အိပ်လို့မရတဲ့လူက လမင်းကို ခိုးကြည့်တော့ လိပ်ပြာအတောင်ပံတွေ နဲ့ လွင့်လို့နေတယ်၊၊ကောင်းကင်က လမင်းကို စိုးရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့ တိမ်တွေနဲ့ကွယ်ဝှက်ပစ်တယ်၊၊သီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ညတွေထဲမှာ ညကိုလိုက်ရှာ နေလေတယ်၊၊ မေဂျူနို. . . ရင်ထဲမှာ သာနေတဲ့ အစိမ်းရောင်လမင်းလေးကိုရော ဘယ်လို တိမ်တိုက်မျိုးနဲ့ ဝှက်ကွယ်ထားရမလဲ…..လွမ်းနေတယ်…..၊၊
ချစ်တယ်….မေဂျူနို ၊၊ တိုးတိုးလေး အပြောမှာ ပဲ့တင်သံတွေ လှုပ်ခတ်သွားပါသလား ၊၊ အချစ်ကို ရောင့်ရဲတတ်ရင် ရောင့်ရဲမှုကို ချစ်တတ်လာပါလိမ့်မယ် ၊၊ ကားမှတ်တိုင်လေး ဖြစ်ချင်ရဲ့ ၊၊ လိုင်းကားအိုလေး ဖြစ်ချင်ရဲ့ ၊၊ ပြတင်းပေါက်လေး ဖြစ်ချင်ရဲ့ ၊၊ ကိုယ်ရှာတွေ့တဲ့ အစိမ်းရောင် မျက်ဝန်းပန်းပွင့်လေးကို ငေးကြည့်ချင် မိရဲ့ ၊၊ ဒီလောက်ပါပဲ ကွယ် ၊၊ မေဂျူနို . . . ပဲ့တင်သံတို့က တိုးတိုးလေး လှုပ်ခတ်သွားလေရဲ့ ၊၊ ချစ်တယ် ကွယ်၊၊
တစ်ပုဒ်တည်းသော ကဗျာလေးကိုပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရွတ်. . . . နေ မိ
ယုံကြည်မှု ( ဘုန်းသန့်ခန့် )
မင်း မျက်ဝန်းကို စောင့်မယ် ၊၊
ကိုယ် သင်းကွဲခဲ့တယ် ၊၊
ကိုယ့်ကို မြင်လိမ့်မယ် ၊၊
တိုးတိုးလေး ပဲ ရွတ်နေမိ . . . . တယ်၊၊
မင်း မျက်ဝန်း စိမ်းလေး ကိုယ့်ဆီမှာ လင်းမယ် . . . . . ၊၊
ဒိုင်ယာရီ သော့လေး မင်းလက်ထဲ ရောက်မယ်. . . . . ၊၊
တိုး တိုး လေး ပါ ပဲ ကွယ် . . . .
မေ ဂျူ နို
ချစ် သော မေ . . . . .
ပန်း ပွင့် သံ တွေ ကြား လိုက် မိ ရဲ့ လား …………………………၊၊ ၊၊
ရင်ထဲမှာလည်း မသေချာခြင်းခြေလှမ်းတွေ မှားနေတုန်း
ကျွန်တော့်ချစ်ခြင်းတွေမပါစေရဘူး မကြည်ဖြူ ။
ဒီဖက်လှည့်လို့ ပြုံးပြစမ်းပါဦးလား မကြည်ဖြူ
ဆေး ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့ ။
မီး နေ ၀င်
Posted by အနတ္တ အနော်မာ comments (0)
...ပန်းချီကားတခု၏ စုတ်ချက်ဟာ ပန်းချီကား ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်...
မြစ်မွေ့ ရာ ညွှန့် ထ
လေ ဝေး ပြေး
( ည ၈နာရီ ၁၀ မိနစ်)
Posted by handsofenlightenment comments (1)
"တောက် နေကလဲပူလိုက်တာ မိုးလေးအုံ့နေရင်ကောင်းမယ်ကွာ"
"ဆူးလေ .... ဆူးလေ"
"ရွှေဂုံတိုင် ၅၀ ကျော်ရင် ၁၀၀ "
"ရှေ့ကားနဲ့ ၁၀ မိနစ်"
"ဗမာဆေးနဲ့ ၁၀၀ ဖိုး"
ဆန္ဒများ.... ဆန္ဒများ .....
အရှင်လတ်လတ် သိက္ခာဖြင့် ထိမ်းပါ
"ကားခလေးတွေ လှမ်းထားမယ် အကြွေမပါရင် ခဏစောင့်"
" အားလုံးပဲ ဂိတ်ဆုံးပါပြီ" "ဒဂုံ ပြန်မယ် ... ဒဂုံ"
"Eleven ရမယ်" Weekly ရမယ်"
"ရယ်ဒီမိတ်တွေ ၁၅၀၀" "ဒီလိုပစ်ချ မကွဲဘူး"
"ဘာလိုလဲ အစ်ကို ၀င်ကြည့်လေ" " တူးတီး ပုံမှန် V တစ်ပွဲ"
"မိုးကလည်းရွာလာပြီ ... စိုတိစိုစွတ်နဲ့ လျောက်ရဦးမယ်"
လူဘ၀ အလိုကျ တော်တော်များများ
"ကားကွ မင်းအဖေ မောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး"
"ဘုရား ... ဘုရား ကံကောင်းလို့"
"၁၀ ပေ ၂ချပ်ထုတ်မယ်" "ခန့်မှန်းလစာဘယ်လောက်လဲ"
"သြော် .. လုပ်သက်ကြာပြီပဲ" "၁၀ ပေ ၂ချပ်ထပ်ထုတ်မယ်"
"မင်းတောင်းတာများတယ်" "ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်က သိပ်မကောင်းဘူး"
"၅ပေ ၃ပေ ကျန်သေးလား" "ခန့်မှန်းလစာနည်းနည်းလျော့"
ဟုတ်ကဲ့ . . . လင်္ကာချောဖို့ မုသားသုံးပါစေ
"အမေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်သွားစားမလို့ ၃သောင်းလောက်" "ဒါနရှင်များ ရှင်"
"ကန်တော့ပါသေးရဲ့" "၃ သောင်းလောက်လား"
အရပ်သုံးဘာသာစကားဖြင့် မျက်ရည် ( ) စီစီ
ထုထည်ကို ဖော်ပြခြင်းငှာ မစွမ်းသာသောကြောင့်
ထုထည် ( ) စီစီ ရှိ မျက်ရည်ဖြင့်
အရပ်သုံးဘာသာစကားတွင် ၀င်ရောက်နေထိုင်ရင်း ၊ နေရင်း ၊
ထိုင်ရင်း ဘေးတိုက်ကျလာတဲ့နေ့ တွေ အကြောင်း/ကြောင့်
ဘေးထိုင် ဘုပြောခြင်း/ခံရခြင်း နှင့်
အတူ အားစိုက်ထုတ်မှုချွေးစက်တွေကို ယပ်ခပ်ပေးနေရတာ/ ရလို့နေသာထိုင်သာ
အရောင်ပြောင်းသီအိုရီ မရှိလို့ကိုအမည်မဲ့ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လို
ဘာလိုလို ညာလိုလို လိုလိုနေတဲ့
ဆင်ခြေဖုန်းဆန်လာတဲ့ လူ အဖြစ်နဲ့ဒီနေ့ ပေါ်ထိုင်
ကြည့်တော့ မနက်ဖြန်ဆိုတာလည်း မနေ့ ကနဲ့ တူသလိုလို
ဆိုပေမဲ့ ပစ်ဖဲတိုင်းဟာ ပိုဖဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့
တာဝန်ဝတ္တရားလို ၊ အာသီသလို ၊ လက်ခေါက်မှုတ်သံလို
သင်၏ အိမ်မက်များကို ကျွန်ုပ် ၏ အတွေး ဖြင့်
သားဖေါက်ရန် လို/ မလို
မီးပျက်နေတဲ့ ကန္တာရတစ်ခြမ်းမှာ အသက်ရူကြပ်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်ကောင်မှ ကြေးစားမလုပ်ချင်ဘူး……
ကိုယ့်ဓါးကိုကိုယ် မြအောင် သွေးချင်ကြတာချည်းပဲ…….။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အချိုးမပြေကြောင်း ဒီနေ့မှသိတယ်..။
သွားစမ်းပါ… ခရစသ်နှစ်ထောင်က ထွင်းထုခဲ့တဲ့
နှင်းဆီရွက်စိမ်းစိမ်းလေး ရနံတွေ ပြာပြာသလဲကြွေကျ
စိုတိစိုဖတ်နဲ့ ဘ၀ကို အံစာခေါက်ကြည့်တော့
အိန္ဒြာကျော်ဇင်အကြောင်း ပြောတုန်းပဲလား ?
“ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်ကောင်မှ ကြေးစားမလုပ်ချင်ဘူး”ဆိုတာကို………
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် တရားမ၀င်သော မိတ်ဆွေများဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
သင်အန္တရာယ်ကင်းလိုလျှင် ကျွန်ုပ်ကိုပါ သတိထားပါ…..
ဓါးပြဇာတ်အတွက် ပွဲသိမ်းတီးလုံး လွင့်ပျံလာခဲ့ပြီ…
နက္ခတ်မှားတဲ့ရေသောက်မြစ် ဘီလူးနက္ခတ်ကျတဲ့အချိန် ...